Nkà na ụzụ Blog |
MGBE AHAG AKWERSKWỌ AKWKWỌ AKWERSKWỌ
AKW BKWỌ AKW FRKWỌ AKWERSKWỌ AKW PKWỌ AKW PersonalKWỌ AKW PersonalKWỌ AKW PersonalKWỌ nke COMI AROMA. Anyị bụ ndị na-emepụta nke karama iko maka isi na ịchọ mma ụlọ ọrụ. Anyị ọkọlọtọ karama na-kwesịrị enịm na-enyere gị ika. Also nwekwara nhọrọ nke ịkpụ karama iko gị nke ị chọrọ ...
Ngwunye agụụ nwere ike idebe ihe ịchọ mma karịa?
Ngwunye mgbapụta agụụ isi nke ngwaahịa nlekọta anụ ahụ na-eji ike iweghachite nke oge opupu ihe ubi iji gbochie ikuku ịbanye na karama ahụ, na-akpata ọnọdụ agụụ, si otú a na-enweta nsonaazụ "naanị ma ọ bụghị ma ọ bụghị". Oge ọ bụla ị pịa isi mgbapụta, obere pistin na ala nke ...
Kedu ihe kpatara mkpa kacha mkpa ji jiri karama iko?
Ọrụ nke iko gbara ọchịchịrị: Ọ bụ iji gbochie ụzarị ultraviolet na anyanwụ ma gbochie ụfọdụ ihe ndị na-arụ ọrụ nke na-eme ka ihe na-eme ka mmiri ghara ikpo ọkụ na ire ere. N'ikwu okwu n'ozuzu, a na-eji karama iko ojii eme ihe maka ngwaahịa nlekọta anụ ahụ dị ka antioxidant, mgbochi ịka nká, na ịcha ọcha. Maka ule ...
Ọrụ nkwakọ ngwaahịa nke ihe dị iche iche (Glass, Plastic)?
Plastic karama VS Glass karama, nke na otu onye bụ mma? E nwere ụdị ihe atọ dị mkpa maka ngwaahịa nlekọta anụ ahụ: plastik, iko na ọla. N'ime ha, ihe eji emepụta plastik kachasị ruo 80%, na-esote iko, ebe ihe ndekọ metal bụ naanị 8%. Agbanyeghị na iji rọba bụ highe ...
Olee otú ime ka shock nkwakọ?
Nkwakọ ngwaahịa na-awụ akpata oyi n'ahụ, iji belata mmetụta na ịma jijiji nke ọdịnaya, were usoro nchekwa iji chebe nchekwa nke nkwakọ ngwaahịa ya. Ihe ndị a na-ejikarị na-ekpuchi ihe ndị a na-eji eme ihe: plastik fọọlụ, kaadiboodu ụgbụgbọ mmanụ, ịkpụzi pulp, kaadiboodu corrugated, paper, air cushion and ...
Nkọwapụta Ihe na Ọnụ-COMI AROMA
Iko karama maka ntecha na-tumadi kewara: akpụkpọ elekọta ngwaahịa (ude, ude mmiri), senti, mmanụ dị mkpa, ntu Polish ọtụtụ edemede nke ikike bụ obere, ihe karịrị 200 ml ikike na-adịkarịghị ji na ntecha. N'ihi na-ekpo ọkụ na-ere ngwaahịa na nnukwu ngwaahịa, dị ka mkpa mmanụ bott ...
Global Glass nkwakọ kalama Market Outlook
Nnyocha na Ahịa nyere akụkọ banyere echiche mkpuchi karama zuru ụwa ọnụ (2019-2027). Dabere na akụkọ ahụ, ahịa karama iko ụwa zuru ụwa ọnụ ruru US $ 63.77 ijeri na 2019 ma na-atụ anya iru US $ 105.44 na 2027. N'ime oge amụma, ogige ...
Nsogbu Ndị A Na-ahụkarị na Mbufe Akwụkwọ Mbufe & Usoro kwekọrọ
Akpata analysis nke nkịtị nsogbu na mmiri nyefe ebi akwụkwọ na kwekọrọ ekwekọ countermeasure 1. Ngwaahịa nwere pitting, pinholes, obere egosipụta na o siri ike anya mgbe mmiri nyefe. Akpata Analysis: • Ogbako ogbako gburugburu ebe obibi, ájá sere n'elu, ájá n'elu nke workpiece ma ọ bụ ájá ...
Ahịa Nkwakọ Ahịa - Uto, Tredị, na amụma (2020 - 2025)
A na-eme atụmatụ ahịa nkwakọ ngwaahịa zuru ụwa ọnụ na USD 56.64 ijeri na 2019, a na-atụ anya ịdebanye aha CAGR nke 4.39%, iji ruo USD 73.29 ijeri na 2025. A maara Glass Packaging dị ka otu n'ime ụdị nkwakọ ngwaahịa tụkwasịrị obi maka ahụike, uto na gburugburu nchekwa. N'agbanyeghị ihu arọ ...
Ngosiputa Ngwa na Perfumery Glass Bottles Market - Uto, Trends, na amụma (2020 - 2025)
COMI AROMA Weta Agba Beautuful na Worldwa. Nchịkọta ahịa Ahịa ahịa ụwa na mmanụ karama mmanụ na-esi ísì ụtọ dị ọnụ ahịa na USD 1809.28 na 2019 ma na-eme atụmatụ ịhụ CAGR nke 3.63% karịa oge amụma (2020-2025). Obodo ukwu, na-eto eto puku afọ iri, a ...
Kedu ihe kpatara ịhọrọ iko?
COMI AROMA Nye gị Nature, 100% recyclable, Reused, Health Karama maka Ngosiputa Ngwa, Diffuser's Packaging. www.comiaroma.com Uru nke nkwakọ ngwaahịa iko doro anya: ọ na-adigide, ọ na-adịghị arụ ọrụ, Ọ bụ 100% na enweghị ike ịgbanwe agbanwe, reusable na refillable; Ọ dị mma ịchekwa fo ...
Ndị na-esi ísì ụtọ nke na-enweghị ike ịnụ ihe ọ bụla.
Ndị ụlọ ọrụ na-arịwanye elu na nkà na ụzụ iji mepụta ihe ndị kachasị mma, nke na-esi ísì ụtọ pụrụ iche nke nwere ike ịmepụta na nkeji ole na ole. N'afọ gara aga, onye na-esi ísì ụtọ Switzerland nke Givaudan Fragrances malitere na Carto, ihe eji ọgụgụ isi na-arụ ọrụ iji nyere ndị na-esi ísì ụtọ aka. Iji mmetụ scr ...
Akpa iko bụ ụdị iko maka mmepụta nke iko iko, dị ka karama, ite, mmanya na-egbu egbu, na ọkwá. Akpa efere dị iche na iko dị larịị (eji windo, ọnụ ụzọ iko, mgbidi transperent, windshields) na eriri iko (eji maka mkpuchi ọkụ, na fiberglass com ...
Usoro n'ichepụta karama iko A na-eme n'ichepụta karama iko na ụlọ ọrụ na-emepụta iko iko n'ọtụtụ usoro. Usoro Nzuzo Na-ekpo ọkụ Agba nke mbụ nke usoro mmepụta karama iko na-amalite site na usoro ngwụcha ọkụ, nke na-ewekarị oke ọkụ iji mepụta ...
Soda Lime Glass-Gini bu Soda Lime Glass?
Gịnị bụ Soda Wayo Glass? Soda lime iko bụ ndị na-akacha emepụta ụdị iko, na-eme ka 90% nke niile iko arụpụtara. N'ịbụ ndị e mepụtara ruo ọtụtụ narị afọ, ọ bụ ngwakọta nke silica, soda, na wayo na ọtụtụ ihe bara uru maka ngwa gafee ọtụtụ ...
Anyị niile maara ihe alụlụ ịgba alụlụ na-eme, na-agbapụta ịgba mmiri iji na-ewepụta ngwaahịa, mana ị jụtụla etu o si arụ ọrụ? Nke mbu, olee otu ichoro ikuku gi? Dabere na ngwaahịa gị, ị nwere ike ịhọrọ ụdị misting nke kachasị baara gị uru. Ezigbo igwe na-agbapụta mmiri na-eme ka mkpụmkpụ, ire ụtọ ...
Chọta ngwugwu maka ngwaahịa gị bụ naanị akụkụ mbụ nke ọrụ ahụ, ugbu a ịkwesịrị ijide n'aka na ngwaahịa gị ga-agabiga akara & arọ yana etu esi ewepụta nnukwu. Nke a bụ ebe ị na - ahọrọ mmechi gị. Ndị a bụ ụfọdụ ihe ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ mmechi maka ngwugwu gị. Cl ...
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa iji mezuo anya gị chọrọ bụ n'ụzọ e si chọọ ngwugwu gị mma. E nwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche ma a bịa n'ịchọ mma na imecha, mana ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị a kachasị eme: Agba agba agba agba agba nwere ụzọ dị mfe ikwu ...
Nkwakọ ngwaahịa dị mkpa
Innovation na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-aga ngwa ngwa ma anaghị agwụ agwụ. Meghari usoro nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe ngwa ngwa chọrọ ụzọ iche echiche maka ịchọta ogo nkwakọ ngwaahịa dị elu, nke pụrụ iche, na ọhụụ nke ga-enyere ndị ahịa gị aka ịgbanwe. Lee ihe anọ na ...
Ihe abụọ dị mkpa dị na akpa bụ ike na-erubiga ókè (OFC) na ike juputara (NFC). Ghọta ọdịiche dị n’etiti ha abụọ nwere ike inye aka n’ịchọta ngwungwu ziri ezi maka ngwa gị yana ịbelata ọnụọgụ ndochi na ịkpọ aha njehie. Ijupu ikike (OFC) T ...
Imegharị iko kalama
Ngwongwo iko na-enye ihe ngwọta dị ukwuu maka mkpa nkwakọ ngwaahịa gị. Glass bụ 100% recyclable na ọ bụrụ na recycled n'ụzọ kwesịrị ekwesị ọ ga-atụfu ya ọcha ma ọ bụ àgwà ya n'agbanyeghị ugboro ole ọ na-reused. Ighagharị iko bụkwa usoro dị irè ma dị irè nke nwere ike ịtụgharị iko iko ochie ...